QISO QIIMO BADAN: Nin iyo Xaaskiisa Ayaa..... - Daryeel Magazine
Nin iyo xaaskiisa ayaa waxaa jirtay in xiliyada laga nasto shaqooyinka ay habeenada qaarkood maqaayadaha u casho tegi jireen.
Habeen habeenada ka mid ah isagoo ninka isu diyaariyey in xaaskiisa uu kaxeeyo ayaa waxaa dhacday in marwadii ay ku tiri gacaliyeyaheeda waxaan kaa codsanayaa halkii aan anigu ku raaci lahaa in aad casuunto oo aad kaxeyso la soo casheyso waqtina la soo qaadato hooyadaa.
Ninki ayaa jiriricooday wuxuuna ku yiri: “Allaha ku barakeeyo hana ku abaalmariyo marwadeydii sharafta badneyd.” waa runtaa inta ugu badan shaqada,adiga iyo caruurta ayaan ku mashquulay, dabeedna wuxuu durbadiiba wacay Hooyadii. Wuxuuna u sheegay inuu soo marayo wada lugeynayaan, soona wada cunteynayaan.
Hooyadii ayaa rumeysan weyday in wiilkeeda oo inta badan ayan waqti isku helin in ay afkiisa ka maqasho kelmadahaa qiimaha badan waxaana Hooyada ka buuxsamay farxad.
Wuu soo maray, way wada lugeeyeen, cunto soo wada cuneen,hase yeeshee hooyadu iyadu ma daneynayn goobta ay tagtay iyo cuntada, waxaana ugu muhiimsanaa waa in wiilkeeda uu naxariis iyo ihtimaam u muujiyay dhinaceeda, uusana hilmaamin, inuusan dayacin hooyadii xitaa isagoo mashquul ku ah shaqo, xaaskiisa iyo caruurtiisa. Waxay la qaadatay waqti wanaagsan taasoo uga dhigneyd maalin ka mid ah kuwa ugu farxada badan nolosheeda.
Markii ay soo noqdeen ayuu weydiiyay hooyadii in ay faraxsan tahay. Waxay tiri haa wiilkeygiyow Alle ayaan ku dhaartee aad baan kuugu faraxsanahay adiga iyo reerkaagaba.Wuxuu ugu jawaabay, “In Sha Allaah waqti kale ayaan sidan oo kale sameynayaa.”
Waxay tiri, “Maya hooyo, casumaada xigta aniga ayay iga imanaysaa In Sha Allaah .” Wuuna ku waafaqay.
Todobaadyo iyo Bilo ayaa ka soo gudbay, waxaana dhacday in Hooyadii ay xanuunsatay, ka dibna ay geeriyootay Allaha u naxariisto iyadoo uu aad uga murugooday geerida hooyadii.
Maalmo ka dib ayaa waxaa dhacday in Maqaayadii ay wada tegi jireen hooyadii xiligii ay noolayd ayaa maamulkeedu uu soo wacay waxaana loo sheegay in casuumaad ay u taal isaga iyo xaaskiisa, qarashka casuumadana mar hore la bixiyay.
Isagoo yaaban ayuu is weydiiyay cida bixisay dabeedna Xaaskiisi ayay isu raaceen, waxaana markii ay Maqaayada yimaadeen loo dhiibay warqad looga tagay. waxayna u qorneyd sidan:
“Wiilkeyga qaaliga ahaa, Allaha ku abaal mariyo, waxaan kugula ballamay inaan isla goobtan kugu casumo balse mashquul badan baad ahayd, ballanteydi ayaan fuliyay adiga & xaaskaaga ayaana idin wada casumay, hadaan annaga is arki weynay. Ducadeyda ayaa idin la jirta.
Walaal qiimaha waalidku gaar ahaan hooyada waa mid aad u weyn, Ha ka careysiin weligaa. Ha dayicin. ha ka mashquulin. Ma aha inaan sugno marka hooyadu dhimato ama aan waalid noqono inaan garano qiimaha hooyada. Haddii waalidiintaadu nool yahiin si gaar ah Hooyadaa la xiriir, waqti fiican la qaado, cafis weydiiso. Waad Guuleysanaysaa idanka Alle.
Diyaariye: Abdullahi Nur Colombo
Qiso Qalbigaaga Taabaneysa Qiso Qiimo Badan Xikmado Iyo Murti Qiimo Badan Qiso Cajiib Ah: Imaam Shaafici Ayaa……